Mayelana NATHI - Dingzhou City YouYou Metal Products Co., Ltd.
SIYAKWAMUKELA UHLELO LOKWENZA KWEZIMOTO WAKHO ...
• Kwakhiwa ngo-1989
• Umkhiqizi we-Nail & Screw & Wire noMachete
• 260+ Abasebenzi
• Izinhlelo ze-ISO 9001 Management Management
• Kuqinisekiswe i-SGS
• Okuzimele nomndeni
Umugqa we Ukukhiqizwa
Isungulwe ngo-1989, i-YouYou (Iqembu) Izinsimbi zinamathela kakhulu ekwandiseni nasekuthuthukiseni ikhwalithi yomkhiqizo nemishini. Sithuthukise umdwebo wocingo lwasekhaya, ukwenza izinzipho, ukushukumisa, ukushisa ukushisa, ukwelashwa kwendawo kanye nemishini yokuvikela imvelo, ehlangabezana nezindinganiso zikazwelonke zokuvikelwa kwemvelo futhi ibandakanyeka kakhulu kuzipikili zikasimende.
Umkhiqizo omkhulu ufaka i-nail yensimbi emnyama, isipikili sikakhonkolo, isipikili esivamile socingo, isipikili sokufulela, isikulufa se-gypsum, isikulufa se-chipborad, ucingo oluhlanganisiwe, ucingo olumnyama olunamathelisiwe, ucingo oluhlanganiswe nge-pvc, ucingo oluhlabayo, ucingo lwensimbi oluhlabayo, ucingo lwensimbi engagqwali, ucelemba kamoba nezinhlobo ezahlukahlukene zocingo lwensimbi, njll. Kuthengiswe kahle ezweni lonke, ama-70% womkhiqizo athunyelwa kuwo wonke umhlaba, njenge-Europe, iMelika, i-Afrika, iMiddle East kanye neSouth East Asia, njll.
I-YouYou Metal ihlale inaka kakhulu ukuthuthukiswa kobuchwepheshe.Ukusungula, ukuthuthukisa kanye nocwaningo kungamathuluzi abalulekile ku-YouYou.Ngonyaka ka-2010, samukela ubuchwepheshe obuthuthukisa isithando somlilo seGesi, sazakhela nohlelo lwethu lokwelashwa kweNdle, okwenza imikhiqizo yethu ibe ngaphezulu kwezemvelo enobungani, kanye nokufaka isandla ekuthuthukisweni okusimeme komnotho wesifunda.Lezo zinto ezintsha zithuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, zinciphisa ukulahleka, zandisa ikhwalithi yezipikili nocingo, zisivumela izinzuzo zokuncintisana futhi zakhe isisekelo sokukhiqizwa kwekhwalithi.
Bonke abasebenzi bezinsimbi ze-YouYou (Group) ku-2020 balwela ukufeza inhloso yama-yuan ayizigidi ezingama-600 ngonyaka wokukhipha inani lonyaka kungakapheli iminyaka emithathu ngokulindelwe nothando.
Izinsimbi ze-YouYou (Group) zithatha "ukupheleliswa kokuphathwa, ukuhlomulisana, ukuthuthuka ndawonye" njengesiqondiso sayo, futhi kunamathela esimisweni esiyinhloko "sokuphatha iklayenti lethu ngobuqotho", ibheka "imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo ekhethwayo" njengomgomo wayo.Silwela ukuba yinkampani ehamba phambili embonini ejulile futhi ngemikhiqizo yethu ithuthukise kanye nemfuneko ejwayelekile yamakhasimende.